Nandresy tamin’ny tolona manan-tantara ara-pitsarana ny fikambanam-pifandraisana tarihin’ny indizeny ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Santatra ara-pitsarana napetraka ho an'ny haino aman-jerim-piarahamonina
Voadika ny 05 Febroary 2021 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Français, عربي, বাংলা, Ελληνικά, English, English, Português, Español
Tefiendrika TIC. Nahazoana alalana.
Tamin'ny 13 Janoary, taorian'ny ady ara-pitsarana naharitra efa ho telo taona, nanome rariny ho an'ny Fikambanana Fifandraisan-davitry ny Fiarahamonina Indizeny (Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, TIC) ny Fitsarana voalohany ao amin'ny Fitsarana tampony ao Meksika, izay nanafaka azy ireo tsy handoa vola amin'ny fahazoan-dalana hivarotra amin'ny fampiasana ny radio spectrum.
Ahafahan'ny TIC manolotra servisy finday mora vidy amin'ireo vondrom-piarahamonina indizeny ao amin'ny firenena ity fanapaha-kevitra ity. Nametraka santatra ara-pitsarana ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ihany koa ilay raharaham-pitsarana [ho afaka] hampiasa maimaim-poana ny servisim-pifandraisan'izy ireo manokana araka ny lisansa fahazoa-miasa ara-tsosialy – mametraka tsipika manasaraka ireo mpamatsy ara-barotra sy ny mpamatsy vondrom-piarahamonina.
Vaovao mahafinaritra! Taorian'ny latsa-bato tsy nisy nitsipaka, dia nisy fanapahan-kevi-pitsarana tsara navoaka ho an'ny TIC A.C. ho an'ny sehatry ny fifandraisandavitra amin'ny ankapobeny, miaro ny zon'ireo vazimba teratany amin'ny fampandehanana ny haino aman-jeri-pifandraisan'izy ireo manokana. Zava-bitan'ny vondrom-piarahamonina sy ny fikambanana izany!
Raha ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2010, mandrafitra ny 10% -n'ny mponina ao amin'ny firenena ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany ao Meksika ; na izany aza, zara raha ahitana mpampiasa servisy finday izy ireo. Nilaza ny tatitry ny Indigenous Peoples Mobile Service Coverage Diagnosis fa 16 monja amin'ny vazimba teratany 66 no manana fandrakofana servisy finday 100% hatramin'ny taona 2018.
Fikambanana tsy mitady tombombarotra ahitana vondrom-piarahamonina indizeny 16 avy any Oaxaca izay nanomboka ny taona 2013 ny TIC, mpandraharaha finday lehibe fahaefatra lehibe indrindra ao Meksika. Tamin'ny taona 2016, nahazo ny fahazoa-miasa fifandraisandavitra sosialy indizeny voalohany ity fikambanana ity mba hitantana sy hampiasa ny tambajotra-pindain'izy ireo manokana. Tamin'ny faran'ny taona 2019, dia nahazo fahazoa-miasa faharoa ho an'ny mari-drefy 10 GHz izy ireo, izay hampiasaina hanovana ny tambajotran'izy ireo 2G ho lasa 4G. Ireo no dingana voalohany hiandraiketan'ireo vondrom-piarahamonina indizeny ny fampitam-baovaon'izy ireo manokana.
Mpikambana ao amin'ny TIC manangana tandro-pifandraisana ao Oaxaca, Meksika. Sary avy amin'i Javier de la Cruz, nahazoana alàlana.
Tamin'ny taona 2018, nitaky tamin'ireo nahazo miasa (concessionnaires) indizeny ny mpandrindra ny fifandraisan-davitra nasionaly mba handoa vola 1 tapitrisa pesos (mitovy amin'ny 50.000 USD mahery) amin'ny fahazoana mampiasa andia-maridrefy radio amin'ny tambajotra telefaonina finday. Tsy nampisy fiavahana eo amin'ny mpamatsy ny fiaraha-monina sy ny ara-barotra ny fepetra voalazan'ny lalàna.
Nampidi-doza [mg] ny fisian'ny TIC sy ny fivelomany ity fandoavam-bola ity, izay manome servisy finday sy aterineto mora vidy any ambanivohitra. Tamin'izany fotoana izany, nanasongadina ny mampiavaka ny servisin'izy ireo sy ireo natolotry ny orinasam-barotra i Rodrigo Huerta Reyna, mpandrindra ny sampan-draharaha ara-pitsaranan'ny Fifandraisan-davitra ho an'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany:
Manampy ireo vondrom-piarahamonina marefo ara-toekarena izahay, ka mazava ho azy fa tsy voaloa ny fandaniana, ankoatra ny tsy fanananay fandrisihana haka tombombarotra toy ny ataon'ireo mpandraharaha ara-barotra.
Tamin'io taona io ihany, dia nanomboka ny ady ara-pitsarana ny TIC, nilaza fa tsy fitadiavam-bola ny asany ary, noho izany, tsy misy ny fitrandrahana ara-barotra izay tsy maintsy handoavany vola. Tonga tao amin'ny Fitsarana voalohany tao amin'ny Fitsarana Tampony ao amin'ny Firenena ihany izy ireo ary nandresy tamin'ny Janoary 2021.
Manome servisy telefônina finday amin'ireo faritra manodidina ny 60 misy ireo vondrom-piarahamonina indizeny 18 manana mponina manodidina ny 15000 eo ny TIC amin'izao fotoana izao, araka ny filazan'i Erick Huerta, izay nandray anjara tamin'ny famolavolana ny paikady ara-pitsarana.
Tefiendrika TIC, nahazoana alàlana.
Nanampy izy fa mihoatra ireo vondrom-piarahamonina ireo ny fiantraikan'ny didim-pitsarana:
Mihoatra lavitra amin'ny famahanay olana izany fandoavana zo izany. Manamarika mason-tsivana manankery amin'izay vato misakana ara-pitsarana ho an'ny media indizeny izany.
Toy izany koa ny hevitry ny kaomisera teo aloha an'ny Federal Telecommunications Institute, Alejandra Labardini:
…misy adidy ara-dalàmpanorenana hanaovana tolo-tanana ireo vahoaka sy vondrom-piarahamonina vazimba teratany [amin'ny alàlan'ny] hetsika manamafy na amin'ny fepetra fandraisana sy amin'ny fampiasana ireo fahazoa-miasa. Nametrahana lalàna manokana izany amin'ny fironany ho amin'ny fampiasana ara-tsosialy sy indizeny.
Fanoherana 06 Jona 2022
Fiteny 19 Mey 2022